Ny haavon'ny rano Lake Victoria dia namotika ny rakitsoratra 1964
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny haavon'ny rano Lake Victoria dia namotika ny rakitsoratra 1964
Mandrakotra 68,000 kilometatra toradroa, Farihy Victoria, Ny afovoany lehibe indrindra atsy Afrika, ary ny faharoa an'ny Lake Superior (Etazonia) manerantany, nozarain'i Uganda, Tanzania, ary Kenya any Afrika Atsinanana dia nihoatra ny haavon'ny rano teo alohan'ny tondra-dranomasina maro amoron'ny morony.
Araka ny voalazan'ny Dr. Callist Tindimugaya, kaomisera ao amin'ny minisiteran'ny rano, dia nisondrotra hatramin'ny faramparan'ny volana oktobra 2019 ny farihy talohan'ny nahavoa ny marika 1,134.38 metatra tamin'ny martsa 2020, ka nahapotika ny rakitsoratra teo aloha 1,133.27 metatra voarakitra tamin'ny Mey 1965. Ny tsy fitovizany dia 1.11 metatra ny rano izay tondra-drano tamin'ireo faritra akaiky teo amin'ny lafiny Tanzania ary manodidina ny 1.32 metatra teo amin'ny lafiny Oganda.
"Nomentsika alalana ireo orinasa mpamokatra herinaratra handraraka hatramin'ny 2,400 metatra toratelo isan-tsegondra," hoy i Tindimugaya.
Nanampy izy fa ny famotsorana rano 2,400 metatra toratelo ao amin'ny Owen Falls Dam sy ny tohodrano Jinja dia natao mba hisorohana ny farihy tsy hihoatra ny faritra fiarovana ary hiarovana ireo tohodrano herinaratra. Nilaza izy fa afaka mora mipaka amin'ny faritany ao amin'ny tanànan'i Kampala ity farihy ity.
"Betsaka ny orana noho ny nandrasana tamin'ny volana Mey, ary ny famoahana rano dia hiteraka toerana ho an'ny fitomboan'ny fidiran'ny rano ao anaty farihy," hoy i Tindimugaya. Tsy maintsy apetraka indray ny olona satria ny fandroahana rano bebe kokoa any ambanin'i Neily dia hampitombo ny habetsaky ny rano ao Victoria Nile (eo anelanelan'ny farihy Victoria sy Kyoga) sy ny Farihin'i Albert.
Araka ny filazan'i Tindimugaya, ny Farihy Victoria dia toy ny lovia iray miaraka amina tokana tokana dia ny reniranon'i Neily zarain'ny firenena 11.
Ny farihy Victoria dia fahanana renirano 23 izay niteraka fahasimbana tampoka noho ny orana farany teo izay avy any Kagera any Rwanda ka hatrany amin'ny ony Nyamwamba ao amin'ny Mt. Ruwenzori tandavan. Vaky ny renirano, nitondra ny famindrana ny hopitaly Kilembe any amin'ny distrikan'i Kasese.
Ao Entebbe, misy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Entebbe, ny farihy dia mihalehibe manakaiky ny làlambe Kampala-Entebbe. Ny fiakaran'ny rano koa dia nampiala ny olona tamin'ny toeram-piantsonana, trano fandraisam-bahiny lafo vidy ary trano fonenana manodidina ny Farihy Victoria, anisan'izany ny Lake Victoria Serena Golf Course, Country Lake Resort Garuga, Speke Resort Munyonyo, ary ny Hotely Marriot Protea, ao anatin'izany ny Beach Miami ambany any Port. Bell, Kampala, namboarina tao anatin'ny faritra fiarovana 200 metatra amin'ny Farihy Victoria.
Ao amin'ny Valan-javaboary Murchison Falls ao Paraa, dia tototry ny rano ny seranana fiampitana ferry izay mampitohy ny faritra avaratra sy atsimo amin'ilay valan-javaboary, ka tsy afaka nody ny lakana. Mbola eo am-panamboarana ny tetezana mifanila, saingy tsy misy mpitsidika noho ny areti-mandringana COVID-19, tsy misy faneriterena ho an'ny tompon'andraikitra hitady safidy hafa.
Raha ny filazan'i Atukwatse Abia, torolàlana matihanina amin'ny Uganda Safari Guides Association (USAGA), ny antony lehibe indrindra nahatonga an'io fisehoan-javatra io dia ny "fanapotehana ny velaran-tany sy ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny ankapobeny [ary] ny fanapotehana ny faritra mando sy ny ala indrindra izay hitazona ny rano ary alefa moramora mankany amin'ny farihy. Tsy misy intsony ireo, noho izany, ny rano dia mivezivezy mivantana na avy amin'ny rotsakorana na amin'ny fidirana mankany amin'ny farihy nefa tsy misy mitazona azy mandritra ny fotoana fohy. " Nanampy izy hoe: “Ny rivo-doza kontinanta no tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny orana any amin'ny faritra, ary izany no antony toa ny tamin'ny volana aprily, tsy nahita orana firy izahay (Oganda), fa be kosa ny farihy.
Ny fandosiran'ny rano avy amin'ny ankohonana sy ny indostria miampy ny fanimbana ny faritra mando dia nanjary nahatonga silting mavesatra sy fanalana hetaheta ny farihy namindra ny rano.
Ao amin'ny lahatsoratra ETN mifandraika amin'ny 18 aprily mitondra ny lohateny hoe “Ady ara-tafika hanafoanana ny nosy mitsingevana eo amin'ny loharanon'ny reniranon'i Neily, ”Ireo nosy mitsingevana fantatra amin'ny anarana hoe sudd dia niteraka fahatapahan'ny herinaratra nanerana ny firenena rehefa nanentsina ny turbine tao amin'ny toby famokarana herinaratra mahery vaika tao Jinja nanelingelina vetivety ny fandefasan'ny filoham-pirenena tamin'ny firenena ny COVID-19. Ireto nosy ireto - maro no manarona ny haben'ny kianja filalaovam-baolina roa - nesorina izay nopitsofin'ny fanambadiana sy ny fambolena olombelona.
Ny minisitry ny tontolo iainana, Beatrice Anywar, dia namoaka ultimatum iray herinandro ho an'ny olona rehetra izay monina tsy ara-dalàna manodidina ny rano mba hialana amin'ireo toerana ireo na raha tsy izany dia noroahina an-kery izy ireo.
Mbola tsy jerena raha toa ka hampihatra ireo fandroahana ireo i Anywar satria najanona ny fandroahana olona tamin'ny toerana rehetra nandritra ny areti-mifindra COVID-19 ny filoha Museveni ary norarana koa ny fitsarana tsy hamoaka didy fandroahana.
Paikady momba ny renivohitra any Afrika Andrefana: misy COVID-19